Muuri News Network » Xog Culus oo laga helay Xil ka qaadista MUUNGAAB & Warar sheegaya..
Xog Culus oo laga helay Xil ka qaadista MUUNGAAB & Warar sheegaya..
Xog lagu kalsoonaan karo oo aan ka helnay Villa Somalia ayaa sheegeysa in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xalay qoray Warqada Xil ka qaadista Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab).
Ilo lagu kalsoonaan karo oo katirsan Madaxtooyada Soomaaliya iyo Wasaarada Arimaha Gudaha iyo Federaalka ayaa laga soo xigtay in xilka laga qaaday Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Muungaab ,inkastoo xil kaqaadistaasi wali si rasmi ah loo shaacin.
Wasaarada Arimaha Gudaha iyo xarumaha kale ee Dowlada ayaa saakay si weyn looga hadal hayaa warka la xariira in xilka laga qaaday Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, waxaana suurto gal ah in la shaaciyo digreetada xilka qaadista waqtiyada soo aadan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safar ugu baxaya Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa Wararku sheegayaan in uu qalinka ku duugay in xilka laga qaado Muungaab, halka Warar kalana sheegayaan in ay jirto xil kaqaadista balse laga yaabo in aan horey laga shaacin.
Hadal heynta ugu badan ee Magaalada Muqdisho ayaa saakay ah waraku aadan in xilka laga qaaday Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Muungaab oo mudooyinkii dambe lagu dhaliilayay waxqabad la’aan iyo maamul xumo, bulshada Muqdisho ayaana badi taageersan in xilka laga qaado Muungaab.